बहु गुगल विश्लेषक लिपिहरू लोड गर्दैमा सावधान रहनुहोस् Martech Zone
बहु गुगल विश्लेषक लिपिहरू लोड गर्न सावधान हुनुहोस्
मङ्गलबार, अक्टोबर 2, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
यति धेरै सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीमा उपकरणहरूको यती धेरै एकीकरणको साथ, हामी हाम्रा थुप्रै ग्राहकहरू देखिरहेका छौं जुन गुगल एनालिटिक्स स्क्रिप्टको साथ धेरै पृष्ठमा पटक पटक सम्मिलित गरिएको थियो। यो विनाश तपाईंको मा विश्लेषणपरिणामस्वरूप, आगन्तुकहरूको विशाल ओभर-रिपोर्टि inको परिणाम, प्रति भ्रमण पृष्ठ र लगभग कुनै बाउन्स दर छैन।
आज मात्र हामीसँग एउटा ग्राहक छन जससँग २ प्लगइनहरू लोड गरिएको छ र गुगल ब्लगमा स्क्रिप्ट थप्नका लागि कन्फिगर गरिएको थियो। र न त प्लगइनले वास्तवमै जाँच गरी सकेको छ कि छैन यदि पहिले नै स्क्रिप्ट लोड गरिएको छ भने। परिणाम यो थियो कि भ्रमणहरू अत्यधिक रिपोर्ट गरिएको थियो र तिनीहरूको बाउन्स दर करीव%% थियो। यदि तपाईंको बाउन्स रेट%% भन्दा कममा खस्यो भने, निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको पृष्ठमा बहु स्क्रिप्टको साथ तपाईंको समस्या छ।
एनालिटिक्सको साथमा, तपाईं यो कसरी गर्नुभयो भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? एउटा विधि भनेको तपाईको पृष्ठको स्रोत अवलोकन गर्नका लागि मात्र हो ga.js। तपाईं साइट संग मोनिटर गर्न चाहानुहुन्छ भने पनि बहु गुगल विश्लेषक खाताहरू, त्यहाँ केवल एक स्क्रिप्ट हुनुपर्दछ।
अर्को तरीका यो हो कि तपाइँको ब्राउजरमा तपाइँको विकासकर्ता उपकरणहरू खोल्नुहोस् र तपाइँले पृष्ठ ताजा गरेपछि नेटवर्क संचार अवलोकन गर्नुहोस्। के तपाई ga.js स्क्रिप्ट एक भन्दा धेरै पटक अनुरोध गरिएको देख्नुहुन्छ?
गुगल एनालिटिक्सले एक स्क्रिप्ट लोड गरेर काम गर्दछ जुन सबै जानकारी भेला गर्दछ, जानकारी ब्राउजर कुकिजमा बचत गर्दछ र गुगलका सर्भरमा पठाउँदछ। एक छवि अनुरोध को माध्यम बाट। जब स्क्रिप्ट एक भन्दा बढि लोड हुन्छ, यसले कहिलेकाँही कुकीहरू अधिलेखन गर्दछ, र सर्भरमा बहु छवि अनुरोधहरू पठाउँदछ। त्यो किन हो उछाल दर यति कम छ ... यदि तपाईं एक साइटमा एक भन्दा बढि पृष्ठ भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाईं बाउन्स गर्नुहुन्न। त्यसोभए ... यदि स्क्रिप्टले एक पटक भन्दा बढि फायर गर्दैछ जब तपाइँ एक एकल पृष्ठ भ्रमण गर्नुहुन्छ, यसको मतलब तपाईले बहु पृष्ठहरू भ्रमण गर्नुभयो।
तपाइँको पृष्ठ र तपाइँको जाँच गर्नुहोस् विश्लेषण निश्चित गर्न तपाईको विश्लेषण स्क्रिप्ट तपाईको साइटमा राम्रोसँग स्थापित छ, र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई गल्तिले पटक पटक पटक पटक लोड गर्नुहुन्न। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको डेटा सहि छैन।
टैग: उछाल दरgaga.jsGoogle विश्लेषण
के एडोब साइटग्यालिसिस्ट स्टीम हराइरहेको छ?
गुगलले गुगल ट्याग प्रबन्धक सुरू गर्‍यो
अक्टोबर 3, 2012 बिहान 3:32 बजे
धन्यवाद, म यसमा ध्यान दिनेछु। मलाई लाग्छ कि यो कारण हो कि मेरो ईकमर्स साइटले यसको विश्लेषण रिपोर्टमा साँच्चै ट्राफिक जाँदैन। गुगल स्क्रिप्ट यसको गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टमा रहेको ट्र्याकिङ कोड भन्दा फरक छ। धन्यवाद साथी।
नमस्ते डगलस, महान अन्तरदृष्टि। मैले केहि हप्ता अघि गुगल ट्याग प्रबन्धकमा केहि प्रयोगहरू सुरु गरेदेखि मसँग यस्तै गिरावट आएको थियो:4पृष्ठ/ भ्रमणहरू 🙂 र हालको ०.४७% मा बाउन्स ब्याक 😀
तपाईको पोष्ट पछ्याउँदै, मेरो नतिजा यहाँ छ:
1.Scripts: त्यहाँ 1 ga.js छ (मैले मेरो साइटमा एनालिटिक्स र ट्याग प्रबन्धकको कोड मात्र टाँसें)। म दोस्रो स्क्रिप्ट (ट्याग प्रबन्धक) मा ga.js को कुनै सन्दर्भ देख्न सक्दिन तर gtm.js मात्र। मसँग कुनै ठूलो कोड छैन केवल ती2सँगै टाँसिएको (पहिलो विश्लेषणात्मक, त्यसपछि TM), त्यसैले मलाई एप्लिकेसन प्रयोग गर्न पनि आवश्यक छैन, यद्यपि मैले फायरबग पनि जाँच गरें।
2. ट्याग प्रबन्धक कन्सोलमा मैले एउटा घटना मात्र सिर्जना गरें (सृष्टिको समय, ब्र ड्रप सुरु हुने समय)। यो घटनाले मूल रूपमा आउटबाउन्ड लिङ्कहरूको लागि लिङ्क क्लिक श्रोताको रूपमा काम गर्दछ र यो जेम्स कट्रोनीले आफ्नो ब्लगमा सल्लाह दिएको जस्तै हो। तर मैले थोरै परिमार्जन गरें: एउटा गैर-अन्तर्क्रिया हिट ट्रुमा सेट गरिएको छ (जसलाई बाउन्स दर हिट गर्नु हुँदैन?) तर त्यसपछि मैले यसलाई खाली छोड्नुको सट्टा लेबल=रेफरर थपें, किनकि म त्यहाँ क्लिकहरू जान्न चाहन्छु। कहाँ बाट। (जे भए पनि मैले यसलाई आज हटाइयो किनकि यो मैले सोचेको जस्तो उपयोगी छैन)
3. मसँग अझै पनि पुरानो onClick="_gaq.push()" सम्मिलित भएका केही आउटबाउन्ड लिङ्कहरू छन् तर ती सबैलाई गैर-अन्तर्क्रिया क्लिकलाई True मा सेट गरिएको छ।